Ansixinta baarlamaanka ee xukumadda Soomaaliya oo la soo dhaweeyay | TOP NEWS
By Mohamed Abdulle Hassan on March 29, 2017 No Comment
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow si aqlabiyad leh u ansixiyay Xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra’isalwasaaraha Soomaaliya kaddib markii cod loo qaaday.
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka C/wali Ibraahim Muudeey ayaa guddoominayay fadhiga lagu ansixyay xukumadda cusub. Waxaana soo xaadiray mudanayaal gaaraya 241, waxaana kulankan sidoo kale fadhiyay Ra’iisal Wasaaraha iyo dhamaan golihiisa Wasiirada.
Mar uu ra’iisalwasaare Kheyre ka hadlay wadahadallada gobolada waqooyi ee maamulka Somaliland ayuu sheegay inuu dadaal gelin doono sidii xal waara looga gaari lahaa wadahadalkaasi isaga oo ballan qaaday inuu tabashada jirta kala hadli doono.
Ansixinta baarlamaanka ee xukumadda Soomaaliya oo la soo dhaweeyay added by Mohamed Abdulle Hassan on March 29, 2017